हामी मानव अधिकारको लागि लड्न सक्छौं! द्वारा ∴ www.PixelHELPER.org
यदि तपाईंसँग कहिले समस्या छ र के गर्ने थाहा छैन भने, तब पिक्सेल हेल्पर खोज्नुहोस्
मोरक्कोमा नाजी तानाशाहीका बिर्सिएका LGBT पीडितहरूको लागि होलोकास्ट मेमोरियल माराकेच। मोरक्को को विरोधी LGBT सरकार द्वारा नष्ट।
PixelHELPER द्वारा ट्वीटहरू
पिक्सेल सहयोगी संसारभरको जस्तो देखिन्छ मानवअधिकारका लागि सक्रिय र कलाकार नेटवर्क विरुद्ध दमन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको लागि लड्न। कलाको साथ हामी चाहन्छौं महत्त्वपूर्ण सामाजिक समस्याहरू औंल्याउनुहोस्। हामी पनि संचालन गर्छौं अफ्रिकामा विकास सहायता परियोजनाहरू, आफ्नै क्यान्ड रोटी बेकरीहरू बढाउन उत्पादन खाद्य स्थिरता लागि शरणार्थी शिविर, द्वन्द्व क्षेत्रहरू र प्राकृतिक प्रकोपहरू डिब्बामा टिकाऊ रोटी हामी बढ्दै छौं अफ्रिकामा खाद्य स्थिरता, क्षेत्रमा आपतकालीन सहायता PixelHELPER नजिक अफ्रिका मा क्यान्ड रोटी कारखानाहरूको छेउमा कोशिश गर्दैछ UNHCR शरणार्थी शिविरहरू साना मोबाइल कन्टेनर अस्पताल खोल्न। कृपया हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् मेनू आईटम दान गर्नुहोस् र हाम्रो संगठन को काम समर्थन गर्दछ।
एन्जेला मार्केलले जूलियन असान्जलाई राजनीतिक शरण प्रदान गर्दछन्। भिडियो कला कार्टुन
हास्य समुदाय बनाउँछ! हामी जस्तो लामो समय सम्म मानवता,Liebe र हास्य जडान गर्नुहोस्, यसले हामीलाई के फरक पार्दैन अलग, हास्य तिनीहरूलाई प्रोत्साहन दिन्छ Toleranz, शुद्धमा हंसमुख सहनशीलता हास्य, निःशुल्क को आकार मा व्यक्तित्व सही छ, को वास्तविक लक्ष्य Menschen हुन।
होटल Sonnenbichl लाई प्रकाश प्रक्षेपण, थाईल्याण्डको यातना राजाको जर्मन सीट।
हाम्रो मार्फत कलात्मक काम संसारलाई एक बनाउन दिनुहोस् राम्रो स्थान र यसको नेतृत्व गर्नुहोस् प्रमुख सामाजिक परिवर्तनहरू, गहिराइको उद्देश्य लोकतान्त्रिक समाजको नाम मा Toleranz sollte पिक्सेल सहयोगी दावी दावी गर्नुहोस् घृणाको सहिनु हुँदैन। यसका लागि प्रोजेक्टहरूमा फोकस छ कलात्मक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार र बिरूद्ध विरोधी Semitism.
सही कारणहरूको लागि गलत कामहरू गर्नुहोस्!
मर्न पिक्सेल सहयोगी कार्यकर्ता र कलाकारहरूको एक विश्वव्यापी नेटवर्क संग लडाई असामान्य माध्यम विरुद्ध सामाजिक ills। सहभागी कलाकारहरूले मिडिया रिपोर्टि ofको फोकसमा समस्याहरू राख्नको लागि प्राय: पछिल्लो प्रविधि र व्यंग्यका सबै उपकरणहरू प्रयोग गर्दछन्।
संसारको शोरबाट बहिष्कृत, हामी आफ्नो बाटो, शांत र सुरक्षित, खतरामा नराम्रो र मनको उच्च लक्ष्यको साथमा पृथ्वीको रक्षा गर्न जान्छौं। हाम्रो आधारभूत धारणा यो हो कि फ्रांसीसी क्रांति को "आजादी, भ्रातृत्व समानता" को सिद्धान्त को राजनीतिक अपमान को दोहराव संग लडने को लागि पुनर्जीवित गरिनेछ।
को विनाश मोरक्कन सरकार द्वारा वाल्टर Lübaker भित्ति चित्र।
Bundestag अध्यक्ष वोल्फग्याolf Schuble भने Bundestag मा कि Lübcke "खुल्ला रूपमा हाम्रो खुला समाजले बनाएको प्रवेशमा: शालीनता, सहनशीलता र मानवताका लागि। कलाको स्वतन्त्रता विश्वव्यापी रूपमा खतरनाक छ यसैले P पिक्सेल हेल्पर!
पिक्सेलहेल्परका संस्थापक जर्मनीका हल्का कलाकार ओलिभर बिनेकोस्की हुन्। अन्य प्रकाश र एक्शन कलाकारहरू र धेरै कार्टुनिस्टहरू विश्वभरि फैलिएका छन् र एक राम्रो संसारको लागि पिक्सेलहेल्परको लागि सँगै काम गर्दछन्।
केवल ती व्यक्ति जसले फरक फरक पार्छन् संसारलाई बदल्छन्
तर हाम्रो Zorn बुझ्न सकिने, हामीले के सोचेको कुरा विचार गरौं। हामीले के गर्नु पर्छ? हजुरबा हजुरआमाले चाँदीको लागि चाँदी Bigwigs सीलोन मा?
हाम्रो के छ आमाबाबुले auf den कपासको खेती भारतीयहरुको लागि, र गरीब सक्सोन मा कपर र कलान खान ड्रेस्डेन को नजिकै, बस यति कि कङ्गोलियन 30 प्रति परिवारको बिजुली उपकरण छ।
र कोका र Palatinate मा कफी बिरुवाहरु! पैलेटिनको उत्पत्ति आफ्नै हो स्वास्थ्य बर्बाद भयो ती गन्दाहरूका लागि अफ्रिकी निगमहरू। र सोमालियन माछा पकडने बेडाहरू जसले हाम्रो समुद्री सागर खाली गरेको छयसैले धेरैलाई अहिले जानुपर्छ पूर्वी फ़्रिसियाई समुद्री डाकू हुन।
लगभग सबै हाम्रा हात्तीहरूले उनलाई गोली हान्थे, उनको लागि शतरंज टुक्रा र पियानो कुञ्जी, अब तपाईं उनीहरूको जीपमा आउनुभयो र सफारी बनाउनुहुन्छ र हेर्नुहोस् Bavarian Bavarian मा अन्तिम हात्तीहरु मा। त्यो कठिन छ।
und फिर्ता जब हेरेरो जर्मनीमा आक्रमण गर्यो, र यो एक स्वाबियनको विरुद्धमा जनाइयो, त्यो पछि काम गर्दछ। त्यस्ता केहि, तपाईं आफैं आफैं लुगाबाट बाहिर निस्कनुहुन्न, यो अझै 100 वर्ष पछि दुख्छतपाइँ त्यो छिटो रिकभर गर्न सक्नुहुन्न।
हामी यहाँ हाम्रो घुँडामा उभिएका छौं संक्षारक रसायनहरू, त्यसैले तपाईं सक्नुहुन्छ in Bangladesh को लागि7यूरो जीन्स गर्न सक्छन्।
हाम्रा कतिजना केटीहरु हामी हराएको छौँ Bielefeld मा हीरा खनिज, त्यसो कि बोन्जेस सिएरा लियोन मा गाउन सक्छ "हीरा केटीहरू सबै भन्दा राम्रो मित्र हो ", अब तिनीहरू भूमध्यसागरमा आउँदैछन् र तिनीहरू अझै पनि चाहन्छन् हाम्रो जिममा बस्नुहोस्.
हो, अरू के? हामीले अरूको लागि के गर्नु पर्छ? केही बिंदुमा, यो समाप्त भयोकेही बिंदुमा हामी अधिक गर्न सक्दैनौं! केही बिंदुमा, त्यहाँ थप हुनेछैन!
हाम्रो हृदय टाढा छ, तर हाम्रा सम्भावनाहरू परिमित छन्.
हामी। अनिवार्य शैलीत्मक उपकरणको रूपमा व्यवस्थित ट्याबू ब्रेक
PixelHELPERS को हुन्?
रबिन हुड सबैलाई थाहा छ। कुख्यात डाकू सम्पन्न गम्भीर हुन्छ प्रतिद्वन्द्वीजसका कामहरू सम्भवतः अझै पनि छन् प्रसिद्ध मूल को भन्दा हुनेछ। संग PixelHELPER अन्तरराष्ट्रीय तर्क गर्नुहोस् 70 अन्तर्राष्ट्रिय कलाकारहरू एकको लागि राम्रो संसार, युरोपका धनीहरूबाट लिनुहोस् र गरिबहरूलाई विश्वभर दिनुहोस्। हामी सक्रिय छौं। उनको भीड संग विश्वासी PixelHELPER सँग एक संगठनको रूपमा छ मानव अधिकार उनको मुख्यालयमा अफ्रीका फेला परेन। वर्षौंको लागि हामी जस्तै लड्छौं गरिबको साथी र संरक्षक र एक कसौटीको रूपमा शत्रु ती कसले शक्ति र धन गर्न दुर्व्यवहार दुर्व्यवहार.
मोरक्को मा डिब्बाबंद रोटी आपातकालीन सहायता
"PixelHELPER ले तिनीहरूको आफ्नो क्रान्तिकारी भवन ब्लकलाई कला र व्यंग्यमा तिनीहरूको कामको साथ थप्छ"
भन्छन् जर्मनी रेडियो संस्कृति
"पिक्सेलहेलर राजनीतिक कार्य कलाको सबैभन्दा नवीन इनक्यूबेटर हो र कलाको विस्तारित प्रकारका लागि खडा छ," केही भन्छन्। हामी भन्छौं: कलाले पीडा, उत्तेजित र विद्रोही हुनु पर्ने हुन्छ। हामी ज्ञानको भावनामा सामाजिक आत्म-आश्वासनको एक रूपको रूपमा कलासँग चिन्तित छौं। हाम्रो अभियानहरु राज्य को पाँचौं शक्ति को रूप मा कला को सम्भावनाहरु देखाउन। कला यसैले ऐना होईन जुन तपाईले वास्तविकतामा समात्नुहुन्छ, तर एउटा हथौडा जुन तपाईं यसलाई आकार दिनुहुन्छ।
हामी सम्भावनाहरू चिन्न सक्छौं।
र हामी भन्छौं: हामी PixelHELPER हो
कमजोरहरू पनि शक्तिशाली रूपमा जोडिएका छन्
बाहिर जानुहोस् र आफैलाई साबित गर्नुहोस्।
पिक्सेल हेल्पर घन संसारभरको वरिपरि गयो।
"Day० दिनको आसपास संसार" भन्ने भिडियोमा रुबिकको घन समाधान गर्नु भनेको पृथ्वीको चारै तिर मानिसजातिको भ्रातृ चेनको प्रतीक हो, जुन PixelHELPER आफैंको एन्ड्रोइड प्लेस्टोरमा आफ्नो लाइभस्ट्रीम क्राउडफन्डि with अनुप्रयोगको साथ आकार दिन्छ र दर्शकलाई अन्तर्क्रियाको लागि आमन्त्रित गर्दछ।
जीवनको मार्गमा हामी धेरै निशानहरू छोड्छौँ। यहां सम्म कि अन्य मान्छे को जीवन मा जसको बाटो हामी केवल एक पल्ट पार गरेर र हामी धेरै प्रभावित छ कि पछि उनको जीवन एक अलग बारी भयो। PixelHELPER फाउंडेशन को काम को लागि हाम्रो समाज मा स्थायी सकारात्मक प्रभाव भन्दा अधिक प्रशंसा हुनेछ।
हामी जुनसुकै संसारको लागि जुनसुकै साथ लड्छौं।
प्रत्यक्ष धारामा अन्तर्क्रियात्मक अनुभवको रूपमा मानववाद। फेसबुकमा इमोटिकन्स मार्फत वितरण नियन्त्रण गर्नुहोस्। लाशमा कुनै दौड, रंग, वा धर्म हुँदैन; केवल दिमागहरू! प्रोजेक्ट "बोर्डर विना लामिज" ले आफैंलाई एक अन्तर्क्रियात्मक सहायता झुण्ड प्लेटफर्मको रूपमा देख्दछ। नाम धेरै जोम्बी कम्प्युटरहरूबाट आएको हो जुन बाह्य रूपमा नियन्त्रण गरिन्छ। हाम्रो उद्देश्य प्रत्यक्ष स्ट्रिमको माध्यमबाट दर्शकहरूको अन्तर्क्रियात्मक मद्दतको माध्यमबाट सबै मानवीय प्रकोपहरूको समाधान भन्दा कम केही छैन। हाम्रो लक्ष्य: विश्वको तातो ठाउँबाट २ hour घण्टा लाइभस्ट्रीम। युद्ध क्षेत्रमा पत्रकारहरुलाई सहयोग पुर्‍याउने, शरणार्थी शिविरहरुमा सहायता वितरण गर्ने वा क्रुगर राष्ट्रिय निकुञ्जमा शिकार गर्ने शिकारहरु। हाम्रो झुण्ड नियन्त्रणको संभावनाहरू असीमित छन्। हाम्रो उपकरण: फेसबुक इमोटिकॉनले सहायक झुण्डलाई नियन्त्रण गर्दछ र के गर्ने निर्णय गर्दछ।
शुद्ध प्राविधिक दृष्टिकोणबाट, यसले यस्तो तरिकाले काम गर्दछ कि हामी पारदर्शी नियन्त्रण तत्त्वहरूको साथ एक लाइभ स्ट्रिम सुरु गर्दछौं र त्यसपछि सम्बन्धित "सीमानाबिना लाम्बी" कर्मचारीहरूलाई हाम्रो लाइभ स्ट्रिममा आमन्त्रित गर्दछौं। यस तरिकाले, हामी अन्तर्क्रियात्मक नियन्त्रण तत्वहरूको कोरियोग्राफीमा नजर राख्छौं र स of्कटको स्थानमा प्रत्यक्ष स्ट्रिममा परिवर्तन गर्न चाँडै प्रतिक्रिया दिन्छौं।
PixelHELPER फाउंडेशन | माराकेच, मोरक्कोमा अनुप्रयोगको प्रस्तुति
2009 पिक्सल सहयोगी मूल्य पनि बेघर लागि आफ्नो काम को लागि "तपाईंको आफ्नै क्रान्तिको सुरु गर्नुहोस्" को संस्थापक गर्न Attac प्रतिनिधि दिनुभयो।
2013 पिक्सेल धेरै जर्मन मिडिया हाम्रो कार्य मा एक सुविधा लेख संग Süddeutsche Zeitung सहित मा पायो जो एक बेघर Shit तूफान अभियान, सहयोगी शुरू।
2014 10 हामी अमेरिकी दूतावास, एनएसए / ड्रोन घोटाले मा अभियान संग गरम र मिडिया मा विषय साप्ताहिक पदोन्नति संग राख्न पुग्यो।
२०१ 2015 मा डा। का नयाँ हतियार डिलर Oetker समूह रातो संघीय रक्षा मन्त्रालय लाई प्रकाश प्रक्षेपण को माध्यम बाट राष्ट्रव्यापी परिचित भयो।
अभियान पिक्सल सहयोगी को दुनिया को totalitarian देशहरूमा homosexuals सताउन विरोध गर्न चाहन्छ "प्रेम कुनै सीमा थाह"। त्यहाँ अझै पनि यस्ता कहाँ समलिङ्गीहरूले अवैध र मृत्यु द्वारा punishable छ इरान, नाइजेरिया, माउरिटानिया, सुडान, येमेन, साउदी अरब वा संयुक्त अरब एमिरेट्स, जस्तै संसारमा धेरै देशहरुमा हो!
प्रेमले लिंग, कुनै छालाको रंग वा धर्मलाई जान्दैन! प्रेमले कुनै सीमा जान्दैन! हामी यो बयान फैलाउन चाहन्छौ, पिक्सेल हेल्पर, संसारको वरिपरि लाइट कला परियोजना "इंद्रधनुष" बाट।
बेघर मानिसहरूका लागि आपातकालीन ठुलो क्याप्सूल
जाडो आउँदैछ र घरविहीन मानिसहरूलाई हाम्रो सहयोग चाहिन्छ। हाम्रो समाधान: जर्मनीको सडकमा मानिसहरूलाई स्थिर गर्ने विरुद्धमा पिक्सेल HELPER चिसो आपतकालीन क्याप्सूल। हरेक बर्ष कम जर्मनहरू घर दुर्घटनाबाट मर्छन् घरबारविहीन मानिसहरु भन्दा मृत्युको लागि। जर्मनीमा सामाजिक सुरक्षा जाल बाहिर पचास लाख भन्दा बढी घरविहीन छन्। बारम्बार मानिसहरूलाई ढोका बाहिर पठाइन्छ जब तापक्रम शून्य भन्दा कम हुन्छ र दयनीय ढ .्गले स्थिर गर्दछ। र जर्मनीमा नै घरबारविहीनताको समस्यालाई दिगो तरीकाले सम्बोधन गरिएको छैन। यो त्यहि हो जहाँ घरबारविहीनका लागि हाम्रो पुन: एकीकरण कार्यक्रम खेलमा आउँदछ। चिसो आपतकालिन क्याप्सुलको साथ सुरू गर्दै घरबारविहीनहरूलाई सजिलैसँग टालिन सकिने मृत्युबाट जोगाउन, हामी यस्तो प्रणाली निर्माण गर्दैछौं जुन घरबारविहीनताको सुरक्षा, सुरक्षाको अभाव, रोजगारीका अवसर र सामाजिक अलगावको आधारभूत समस्याहरूसँग लडिरहेछ, र यसले मानिसहरूलाई बिस्तारै सामान्य जीवनमा फर्कन मद्दत गर्दछ। सक्षम गर्दछ।
हामी एक सानो ग्रहमा एक औसत औसत ताराको अनुहारमा बस बन्दको एक उन्नत उन्नत ब्रोड हो।
PixelHELPER को संस्थापक Oliver Bienkowski मोरक्कन सडक कुकुर ET को साथ
यदि तपाईंसँग कहिले समस्या छ र के गर्ने थाहा छैन भने, तब पिक्सेल हेल्पर खोज्नुहोस् नोभेम्बर 15th, 2021Oliver Bienkowski